Akom-baovao Tao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 4:40 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2006 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Nanoratra momba ny fahazoan'ny TECOM ao Dubai ny 35 % ny tsena amin'ny Tunisie Telecom, mpandraharaha manana ny ampihimamba ny telefonina an-tariby (fixe) ao Tonizia izay voalaza fa mifehy ny 72% ny tsenan'ny finday ao amin'ny firenena ihany koa ny Mochekes (FR), MMM, Tom (FR), Kaaboura ary Adib (FR).
Manantena izy ireo fa hitondra fiovana ho amin'ny tsara kokoa ao anatin'ny orinasa mikasika ny kalitaon'ny tolotra izany.
Zizou (FR) nanoratra momba ny fanadihadiana taona 1997 teo amin'ireo vehivavy Toniziana 500 izay nilaza fa 33,8% amin'izy ireo no niharan'ny herisetra tao an-trano. Manontany tena izy raha fantatry ny vehivavy rehetra ny tokony hatao amin'ny tranga tahaka izao ary raha misy ny azo atao hanampiana azy ireo. Nanonona fikambanam-behivavy maromaro any Tonizia izy, ary nanambara fa ny toerana misy ny vehivavy Toniziana amin'izao fotoana izao no tsara indrindra ao amin'ny tontolo Arabo sy Miozolomana, saingy mitohy ny ady.
Nawarat (FR) indray miresaka momba ny fiantsenana ao Tonizia sy ny faharatsian'izany, sy ianao voafetra amin'ny fividianana akanjo tsy dia manao ahoana amin'ny vidiny mora izay tafin'ny olona, na mividy akanjo tena tianao amin'ny vidiny lafo sy tafahoatra.
Iray amin'ireo mpanoratra ao amin'ny KEN (Khadra Environmental News) kosa nanoratra momba ny fomba hanombohan'izy ireo hampiasa harona Toniziana rehefa miantsena ao Montreal ho ezaka isorohana ny fampiasana harona sy fonosana plastika. Mihevitra izy ireo fa ny harona Toniziana no iray amin'ireo fitaovana mpiaro ny tontolo iainana indrindra amin'ny fitaterana entana madinika. Tsy vitan'ny hoe vita amin'ny vokatra voajanahary fotsiny izany, fa azo havaozina ihany koa, ary mampiseho taratra ny fahaiza-manao ny Toniziana.
Manasa ny Toniziana rehetra monina any Tonizia sy any ivelany, ary koa ny tsy Toniziana izy ireo mba hividy ny harona hanaovan-dry zareo fiantsenana.
Karim indray manome tatitra momba ny 5 andron'ny Fetiben'ny Gitara Mediteraneana izay natao tao afovoan-tanànan'i Tunis tamin'ny herinandro lasa. (Andro:1, 2, 3, 4, 5)
ImperatorKing kosa manontany ny filàna sy ny maha zava-dehibe ny tokony hihaonan'ireo bilaogera. Manontany tena izy raha nisy vondrona sasany natsangana teo amin'ireo bilaogera Toniziana noho ny fihaonana. Niresaka ny olan'ny olona sasany matahotra ny hamela ny fiainany manokana sy ny fanafenany anarana mba handray dingana amin'ny fihaonana amin'ireo olona tsy fantany eo amin'ny tontolo tena izy ihany koa izy.
Swobodin indray nanoratra ny anaran'i Afrika, izay avy amin'i Ifriqia, anarana taloha tao Tonizia, izay midika koa hoe ‘Ilay Mpanasaraka’. Nanambara izy fa na dia ny Romanina aza dia zatra niantso an'i Tonizia hoe “Afrika” ary nanohy nanazava ny fiavian'io anarana io izy.
Nanoratra momba ny bilaogy ho fitaovana tambajotra sosialy kosa i MMM sy ireo olona marobe mahaliana nihaona taminy tamin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto noho ny famahanana bilaogy.